Iindaba - Inkomfa ekhethekileyo
Ngo-3: 30 emva kwemini nge-7 ka-Agasti ka-2020, inkampani yethu ibibambe inkomfa yemveliso ekhethekileyo embindini wekomkhulu laseYongkang. Amashishini avela kumzi mveliso wehardware amenyiwe ngokukodwa ukuba azimase le nkomfa. Ngaphantsi kokulungiselela kwethu ngononophelo, inkampani yethu ibonise i-JH-168A 2200W isando sokudiliza umbane, i-JH-4350AK isando sokudiliza umbane, i-JH-150 isando sombane kunye nezinye iimveliso ezintsha kubaphulaphuli
Ekuqhubekeni kokuqhubeka kokusebenza kunye nezinto ezintsha, uphando lwemveliso yenkampani yethu kunye nophuhliso lulandela umkhwa, owenza ukuba kuphuculwe, kusenziwa uthotho lweemveliso eziyilwe ngokukodwa nguJiahao. Kwangelo xesha, kuyilo lwemveliso kunye nemveliso yokwenza uphuhliso olufanelekileyo kunye nokuyila. Ingakumbi kwiimveliso zeoyile, siyaqhubeka nokuphuhlisa iintlobo ezintsha, umsebenzi obukhali, ukugqwesa, kwisicwangciso sokuthengisa esizayo, sikwanika iingcebiso ezihambelanayo, kwaye sikhokele ulwalathiso lwentengiso yemveliso yexesha elizayo.
Kuphuhliso lwexesha elizayo kunye nesicwangciso sotshintsho lwesicwangciso seJiahao, inkampani yethu nayo yenza ingcaciso eneenkcukacha. Ngexesha loqoqosho lobhubhane, kufuneka siguquke kwaye siphucule kwaye senze iimodeli ezintsha kunye namajelo e-commerce. Kungale ndlela kuphela esinokuthi sabelane ngesahlulo sokuhamba kwemarike kwaye siqonde ukuba Win-win ukuhlala kunye.
Wonke umntu wayenomdla kwintlanganiso. Abasebenzi besiza bachaze ngomonde kwaye babonisa iimveliso ezintsha, kubandakanya ukubonakala kwemveliso, indlela yokusebenza ngokuchanekileyo, kunye neenkcukacha zoyilo, iimpawu, imisebenzi, njl, ukuze abo banelungelo lokuthengisa amalungelo babe nokuqonda okubanzi kwemveliso nganye kwaye baqinisekise izicwangciso zabo kumava.
Siyathemba ukuba ngalo mboniso, singadlulisa ulwazi malunga nenkqubela phambili yenkampani yethu, kwaye sifunde ngakumbi malunga nengxelo yeenkcukacha zentengiso kunye nolwazi lweemfuno zabathengi.